Fiantohana fandriam-pihavanana Peace Italiana 2019 nomena an'i Rafael de la Rubia - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Fiantohana fandriam-pihavanana Peace Italy natolotra an'i Rafael de la Rubia
Izahay dia manambara, miaraka am-pifaliana lehibe fa ny "Peace Run Award Italia 2019" dia nomena an'i Rafael de la Rubia (Mpandrindra ankapobeny ao amin'ny Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny asa).
Ity loka ity dia omen'ny Sri Chinmoy Iraisampirenena Iraisam-pirenena ho an'ny Fandriam-pahalemana any Italia.
Amin'io loka io dia fantany ny ezaka ataon'ireo izay miaro ny fampiroboroboana sy ny famoahana ny kolontsain'ny fandriampahalemana.
Ny loka dia ahitana asa kanto.
Izy io dia atolotra mandritra ny lanonana eo anatrehan'ny manampahefana nasionaly sy iraisam-pirenena.
Ny lanonana ofisialy dia hotontosaina 20 Septambra amin'ny 2019 any Roma, eo amin'ny kianja filalaovan'ny Colisée.
Manomboka eto dia maneho ny hafalianay lehibe ho an'ity fanekena ity izahay.
Fifandirana momba ny fifandraisana amin'i Sri Chinmoy Onenss-Home Peace Run Italia sy ny loka
La Sri Chinmoy Onenss-Home Peace Run Italia, fantany fa ny fiadanana maneran-dia toe-javatra izay premised eo amin'ny fametrahana ny kolontsaina fiadanana miorina amin'ny fitomboan'ny olona mahatsiaro tena, mametraka loka mamantatra ny ezaka 'ireo izay miaro ny fampiroboroboana sy ny fampielezana kolontsaina.
Ireo lohahevitra nomena
Ny Sri Chinmoy Onenss-Home Peace Run Italia mikendry ny hanome fankasitrahana ny firenena sy iraisam-pirenena miasa tarehimarika ny hanao izao tontolo izao miorina amin'ny soatoavina ny firaisan-tsaina sy fitiavana eo amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana izao tontolo izao, ary misolo tena ny ohatra sy ny Fanilo fanentanam-panahy.
Ny fifantenana ny kandidà sy ny fanapahan-kevitr'ilay loka dia natolotra ny Biraon'ny Tale ao amin'ny Fikambanan'ny Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italy.
Izany dia ahitana asa kanto izay natolotra nandritra ny lanonana iray teo anatrehan'ny manampahefana nasionaly sy iraisam-pirenena.